Nidina ny « droit d’accise »: nihena ny vidin’ny labiera Star | NewsMada
Nidina ny « droit d’accise »: nihena ny vidin’ny labiera Star
Nahitsy nahena ho 41% raha 109% ny haba alaina amin’ny labiera (droit d’accise), voarakitra ao anatin’ny Tetibolam-panjakana nasiam-panitsiana (LFR 2020), nolanina teny amin’ny Antenimierampirenena ny herinandro lasa teo. Manoloana izany, nanapa-kevitra ny mpitantana ny orinasa Star fa ahena ny vidin’ny labiera ka lasa 3 000 Ar ny vidin’ny iray tavoahangy 65 cl. Nampifanandrifiana amin’ny faha-60 taona niverenan’ny Fahaleovantena rahateo izany.
Manampy izany, atao tokana, ampitoviana, ny vidin’ny vokatra Star rehetra manerana ny Nosy. Izany hoe, tsy mifidy toerana akaiky na lavitra, mitovy avokoa ny vidiny any Antsiranana, any Taolagnaro, eto Antananarivo sy any amin’ny faritra rehetra manerana ny Nosy.
Nilaza ny tompon’andraikitry ny serasera ao amin’ity orinasa ity, Rtoa Randriambolamanana Seheno, fa “laharam-pahamehana ho an’ny Star ny mitsinjo ny fahefa-mividin’ny Malagasy, indrindra amin’izao zava-misy, ny tranga Covid-19, izao. Hambompon’ny firenena ny vita malagasy.